Lolu hambo lokuqala isitimela eyake yenziwa e Italy Izitimela ezethulwe lapho i-Italy yayihlukaniswe phakathi ezweni. Lokhu kwathatha iminyaka engaba ukuze uxhumanise futhi ukuxhuma ujantshi imigqa ekhona emva Italy united. Ulayini wokuqala wesitimela owakhiwa yi-Italy kwakuyiNaples eya ePortici eyayiseMbusweni weSicilies wangaleso sikhathi. Umugqa kwaba 7.25 angu eside. Umugqa emisa phezu 3rd Okthoba e 1839. Lokhu kwaba 9 emva kweminyaka ngowokuqala "yesimanje" umugqa asenkabeni yedolobhakazi Yakhiwa owawungumnyaka eLiverpool futhi Manchester sesitimela.
I-Naples-Salerno wesitimela kuyinto enkulu wesitimela kuleli inethiwekhi wesitimela Italian namuhla futhi unendawo kuThe First Train Trip Ever Made in Italy. It yakha isixhumanisi in the main isiqu umugqa Southern Italy. ikhilomitha Umugqa sika sokuqala ukwakhiwa kukajantshi wesitimela wokuqala. Abantu manje zisebenzisa isitimela komunye kakhulu izindawo owaziwa, idolobha elidumile elisogwini elibizwa ngokuthi i-Amalfi esifundeni saseCampania. Kuyinto idolobha umbukwane ugu. Akuve iphephile ukusho ukuthi uhambo ngesitimela ukuze uthole khona ngasogwini okufanayo. Cabanga amanzi crystal, isihlabathi esimhlophe kanye zasemazweni aluhlaza futhi phakathi ezinye izakhiwo ezinhle ezintsha. Uzoba usendleleni eya babecabanga uhambo lwakho isitimela ukusuka eNaples ukuba Salerno, lapho uyobe ke ngiyogibela ibhasi noma ngezinye izindlela zakho zihlelwe zokuthutha ku Amalfi.
Ngakho-ke manje njengoba ufundile ngohambo lokuqala lwesitimela olwenziwe e-italy, ucabanga Ukubhuka Isitimela Ticket yohambo lwesitimela lwaseYurophu? Kungani ungake uzinike 3 imizuzu kusayithi lethu ukuthola amathikithi eshibhe izindlela zokuhamba. Ngena ngemvume ukuze indawo yethu manje Incwadi Izitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-first-train-trip-ever-made-in-italy%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka.